Nehemaya 4 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Jenesis Ọpụpụ Levitikọs Ọnụ Ọgụgụ Diuterọnọmi Jọshụa Ndị Ikpe Rut 1 Samuel 2 Samuel 1 Ndị Eze 2 Ndị Eze 1 Ihe E Mere 2 Ihe E Mere Ezra Nehemaya Esta Job Abụ Ọma Ilu Ekliziastis Abụ Sọlọmọn Aịzaya Jeremaya Abụ Ákwá Ezikiel Daniel Hosia Joel Emọs Obedaya Jona Maịka Nehọm Habakọk Zefanaya Hagaị Zekaraya Malakaị Matiu Mak Luk Jọn Ọrụ Ndịozi Ndị Rom 1 Ndị Kọrịnt 2 Ndị Kọrịnt Ndị Galeshia Ndị Efesọs Ndị Filipaị Ndị Kọlọsị 1 Ndị Tesalonaịka 2 NdịTesalonaịka 1 Timoti 2 Timoti Taịtọs Faịlimọn Ndị Hibru Jems 1 Pita 2 Pita 1 Jọn 2 Jọn 3 Jọn Jud Mkpughe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 O wee ruo na, ozugbo Sanbalat+ nụrụ na anyị na-ewughachi mgbidi ahụ, iwe+ were ya, ọnụma jukwara ya obi, o wee na-akwa ndị Juu emo.+ 2 O wee malite ikwu n’ihu ụmụnne+ ya na ìgwè ndị agha Sameria, ee, ọ malitere ikwu, sị: “Gịnị ka ndị Juu a na-enweghị ume na-eme? Hà ga-arụ ihe a n’onwe ha? Hà ga-achụ àjà?+ Hà ga-ewucha ya n’otu ụbọchị? Hà ga-esi ná mkpọmkpọ ihe+ a wepụtasịa nkume dị mma, ebe ọ bụ na a gbaala ha ọkụ?” 3 Tobaya+ onye Amọn+ nọkwa ya n’akụkụ, o wee sị: “Ọbụna ihe a ha na-ewu, ọ bụrụ na nkịta ọhịa+ amagoro ya, ọ ghaghị ịkwatu mgbidi ya e ji nkume wuo.” 4 Chineke anyị, biko, nụrụ,+ n’ihi na anyị aghọwo ndị a na-elelị;+ mee ka ha jiri isi ha buru nkọcha+ ha, meekwa ka e meso ha dị ka ihe a kwatara n’agha, ka ha ghọọkwa ndị a dọọrọ n’agha laa n’ala ọzọ. 5 Ekpuchikwala njehie+ ha na mmehie ha n’ihu gị. Ka a ghara ihichapụ ya ehichapụ, n’ihi na ha emewo ndị na-ewu mgbidi a ihe ọjọọ. 6 Anyị wee na-ewu mgbidi ahụ, e wee jikọta mgbidi ahụ dum ọnụ ruo ọkara ịdị elu ya, ndị anyị nọkwa na-enwe obi ịrụ ọrụ.+ 7 O wee ruo na, ozugbo Sanbalat+ na Tobaya+ na ndị Arebia+ na ndị Amọn+ na ndị Ashdọd+ nụrụ na ọrụ ịrụzi mgbidi Jeruselem agawo n’ihu, n’ihi na a malitewo imechi oghere ndị dị na ya, oké iwe were ha. 8 Ha niile wee malite ịgba izu+ ịbịa buso Jeruselem agha wee kpatara m nsogbu. 9 Ma anyị kpekuru Chineke anyị ekpere+ ma debe ndị nche ka ha na-eche nche ehihie na abalị n’ihi ha. 10 Juda wee malite ịsị: “Ike agwụwo onye na-ebu+ ibu arọ, ma e nwere mkpọmkpọ ihe+ dị ukwuu; anyị onwe anyị enweghịkwa ike ịga n’ihu iwu mgbidi a.” 11 Ndị na-emegide anyị nọkwa na-asị: “Ha agaghị ama,+ ha agaghịkwa ahụ anyị ruo mgbe anyị batara n’etiti ha, anyị ga-egbukwa ha wee kwụsị ọrụ ahụ.” 12 O wee ruo na, mgbe ọ bụla ndị Juu bi ha nso batara, ha na-agwa anyị ugboro iri, sị: “Ha ga-esi n’ebe niile anyị bi gbagote, ya bụ, n’ebe unu ga-alọghachi.” 13 M wee debe ndị ikom n’ebe dị iche iche kasị ala n’azụ mgbidi ahụ, n’ebe sara mbara, m wee debe ndị mmadụ n’ebe ahụ, n’ezinụlọ n’ezinụlọ, ha ji mma agha ha,+ ube ha+ na ụta ha. 14 Mgbe m hụrụ na ha na-atụ egwu, m biliri ozugbo gwa ndị a ma ama+ na ndị osote onye na-achị achị+ na ndị ọzọ, sị: “Unu atụla egwu+ n’ihi ha. Chetanụ Jehova bụ́ Onye dị ukwuu+ na Onye dị egwu;+ buoronụ ụmụnne+ unu agha, tinyere ụmụ unu ndị ikom na ụmụ unu ndị inyom, ndị nwunye unu na ebe obibi unu.” 15 O wee ruo na ozugbo ndị iro anyị nụrụ na anyị amatawo ihe ha na-eme, na ezi Chineke emebiwo atụmatụ+ ha, na anyị niile agaghachiwokwa na mgbidi ahụ, onye ọ bụla n’ihu ọrụ ya, 16 ee, o wee ruo na malite n’ụbọchị ahụ gaa n’ihu, ọkara n’ime ụmụ okorobịa+ m nọ na-arụsi ọrụ ike n’ọrụ ahụ, ọkara ha ejiri ube, ọta na ụta, yirikwa uwe agha;+ ndị isi+ nọkwa na-akwado ụlọ Juda dum. 17 Onye ọ bụla n’ime ndị na-ewu mgbidi ahụ na ndị ọrụ bụ́ ndị na-ebu ibu dị arọ ji otu aka na-arụsi ọrụ ike ma jiri aka+ nke ọzọ jide ngwá agha.+ 18 Onye ọ bụla n’ime ndị na-ewu mgbidi ahụ kekwara mma agha n’úkwù,+ ka ha nọ n’ọrụ;+ onye ga-afụ opi+ nọkwa m n’akụkụ. 19 M wee gwa ndị a ma ama na ndị osote onye na-achị achị+ na ndị ọzọ, sị: “Ọrụ a ga-arụ buru ibu, dịkwa ukwuu, anyị gbasakwara n’elu mgbidi a, nọrọkwa ibe anyị n’ebe dị anya. 20 N’ebe unu nụrụ ụda opi, n’ebe ahụ anyị nọ ka unu ga-ezukọta. Chineke anyị ga-eburu anyị agha.”+ 21 Ka anyị nọ na-arụ ọrụ ahụ, ọkara nke ọzọ ji ube, malite mgbe chi bọrọ ruo mgbe kpakpando pụtara. 22 N’oge ahụkwa, m gwara ndị ọrụ ahụ, sị: “Ka ndị ikom ahụ nọbọọ chi na Jeruselem,+ onye nke ọ bụla na onye na-ejere ya ozi, ha ga-abụkwara anyị ndị nche n’abalị na ndị ọrụ n’ehihie.” 23 Mụ+ na ụmụnne+ m na ndị na-ejere m ozi+ na ndị na-eche nche,+ bụ́ ndị nọ m n’azụ, eyipụghị uwe anyị, onye nke ọ bụla ji ngwá agha+ ya n’aka nri.